Shiinaha Dukaan-qaadayaasha Boorsada Hal Garabka - Jumlada & Iibsashada Qiime-dhimista Hal-boorso boorsada - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Boorsooyin>Boorsada hal-garabka ah
(1) Boorsada qorraxda ayaa leh 7-watt qoraxda oo ka qaadi kara 10,000 mAH baytariyada lithium polymer-ka ee biyuhu galaan. Qalabka qoraxda sidoo kale waa laga saari karaa, markaa waad tilmaami kartaa meel kasta oo aad rabto, ama waad iska bixin kartaa socod habeennimo ah. Maaddada nayloonku waxay ka dhigeysaa boorsada mid khafiif ah oo biyuhu xireen, taasoo ka dhigaysa bacdan ugu habboon ee dalxiiska dibadda. (2) Gudaha sidoo kale waxaa ka buuxa howlo badan oo qurux badan. Haddii aad tixgeliso daboolka difaaca gudaha ee laptop-kaaga markaad safraysid, ama aad sawiro ka soo qaadatid oo keliya kamaradda. (3) Waxaa jira jeebado yaryar oo loogu talagalay qalabka, baytariyada iyo waxyaabo kala duwan, iyo sidoo kale dhabarka dambe ee qaybta qorraxda si loo ilaaliyo PowerBank. Qeybta ugu weyn ee ......
Haddii aad raadineysid boorso qalab ah oo siineysa meelo badan oo ka mid ah qaybaha iyo jeebabka si aad u ilaaliso qalabkaaga iyo qalabkaaga, markaa boorsada qalabka FOFRER ayaa dhab ahaantii ah boorsada ugu habboon ee qalabka. Haddii aad inta badan dhaqaajiso qalabka, haysashada boorsada aaladdu maahan mid ku habboon oo keliya, laakiin waa lagama maarmaan.